ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ ပျက်စီးလာမယ့် ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ - Hello Sayarwon
ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်မျိုးပါ။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်သူတစ်ဦးဟာ မသောက်သူတစ်ဦးထက်သေဆုံးနိုင်ခြေ ၃ ဆအထိ မြင့်မားပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ကျန်းမာရေး အကျိုးဆက်တွေက ချက်ခြင်း ဖြစ်လာမှာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါ ဒီအကျိုးဆက်တွေအားလုံးကို ပြန်လျော့သွားတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ဒီကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားပြီး ကိုယ်ယူနေတဲ့ Risk ကို ကောင်းကောင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်။
ဆေးလိပ်ကို ဘေးကင်းကင်းနဲ့ သောက်သုံးလို့ရတဲ့ နည်းမရှိပါဘူး။ စီးကရက်ပဲ သောက်သောက်၊ ဆေးပြင်းလိပ်ပဲသောက်သောက်၊ ရေကို အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့ ခံပြီး သောက်ရတဲ့ ဆေးလိပ်ကိုပဲ သောက်သောက် သင့်ကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်တွေ ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို ဆေးလိပ်ကိုပဲ သောက်သောက် ဆေးရွက်ကြီးဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာမျိုးပါ။ ဆေးရွက်ကြီးထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ နီကိုတင်း၊ ကတ္တရာ နဲ့ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နဲ့ Acetone လို စီးကရက်ထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းက စလို့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် မရှိဘူးဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ စီးကရက်မှာ ပါဝင်ပစ္စည်း ၆၀၀ ကျော်ပါပြီး ဒီပါဝင်ပစ္စည်းတွေ လောင်ကျွမ်းသွားတာနဲ့ ဓါတုပစ္စည်း ၇၀၀၀ ထောင်ကျော်ခန့် ထွက်ရှိလာပါတော့တယ်။
ဒီ ဓါတုပစ္စည်း ၇၀၀၀ ကျော်ထဲမှာ အများစုက အဆိပ်ရှိပြီး ၆၉ ခုခန့်က ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဒီလို သင်ရူသွင်းလိုက်တဲ့ ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ သင့်ရဲ့ အဆုတ်တစ်ခုတည်းကို ထိခိုက်နိုင်တာ မဟုတ်ဘဲ ကျန် ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပွားတဲ့ တစ်ချို့သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှ ဖြစ်တတ်နိုင်သလို တစ်ချို့သော လက္ခဏာတွေကျတော့ ချက်ခြင်း ခန္ဓါကိုယ် အပေါ် သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးလာနိုင်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖော်ပြသွားမှာပါ။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါ Rheumatoid arthritis (RA) ဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က အဆစ်အမြစ်တွေကို မှားယွင်းစွာတိုက်ခိုက်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေဟာ နာကျင်ပြီး အားနည်းလာတတ်ပါတယ်။ RA နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာချက်တွေ အများအပြားလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းရဲ့ အဓိက အချက်ကိုတော့ အခုချိန်ထိ တိတိကျကျ မသိသေးပါဘူး။ လေ့လာချက်တွေအရ ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ RA ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများဟာ သာမန်လူတွေထက်ပိုပြီး အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါဖြစ်တဲ့ rheumatoid arthritis (RA) ရနိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပိုဆိုးတာက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ လူတွေမှာ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲတဲ့ ရောဂါဖြစ်တဲ့ rheumatoid arthritis (RA) ကိုက်ခဲဆေးတွေက အာနိသင်ကောင်းကောင်းမပြနိုင်ပါဘူး။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ အရေပြားနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမြန်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရေပြားဟာ
မသောက်တဲ့ အသက် ၇၀ အရွယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရေပြားနဲ့ ပုံစံတူပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်မယ်ဆိုရင် အရေပြားရှုံ့တွလာတာတွေကို တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒီအရေပြားထိခိုက်မှုတွေက ပြန်မကောင်းလာနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်တာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ အရေပြားရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ အရေပြားကင်ဆာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ Macular Degeneration ဆိုတဲ့ မျက်လုံးရောဂါ ရနိုင်ခြေကို ၂ ဆ အထိမြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။ Macular Degeneration ဆိုတဲ့ရောဂါဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ကုသလို့ မရတဲ့ မျက်လုံးရောဂါတစ်မျိုးပါ။ Macular Degeneration ဆိုတာ မျက်စိအာရုံခံလွှာ (retina) ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပြီး retina ဟာ မျက်လုံးအတွင်းက ပုံရိပ်တွေကို မှတ်သားထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီးမျက်စိအာရုံခံလွှာမှ တစ်ဆင့် အမြင်အာရုံကြောများကို အသုံးပြုကာဦးနှောက်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ မျက်စိအာရုံခံလွှာ (retina) ရဲ့ အလယ်တည့်တည့်ကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို macula လို့ခေါ်ပါတယ်။ macula ဟာ မျက်လုံး အတွင်းထဲမှာ ပုံရိပ်ဖော်ပေးတဲ့ အင်္ဂါဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မျက်လုံးတွေရဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းကို အဓိက ထိန်းချုပ်ပေးထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ အမြင်အာရုံဝေဝါးစေပြီး မျက်လုံး မှန်ဘီလူးတွေမှာ တိမ်ဖြစ်ခြင်းဝေဒနာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ၃ ဆ အထိမြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသားတွေ ဟာ လိင်တံထောင်မတ်မှု ပြဿနာ erectile dysfunction (ED) ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်လေလေ ဒီရောဂါက ပိုဆိုးလာနိုင်လေပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဝှေးစေ့ ကင်ဆာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာကျတော့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ပိုမြင့်မားပါတယ်။
၅။ သွားဖုံးများ ။
သွားဖုံးရောဂါဟာ သွားကျွတ်ခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ သွားဖုံးနာကျင်ခြင်း၊ သွားဖုံးသွေးထွက်ခြင်း အစားစားတဲ့အချိန်နာကျင်ခြင်းနဲ့ ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေဟာ မသောက်တဲ့လူတွေထက် သွားဖုံးရောဂါ ရနိုင်ခြေ ၂ ဆ ပိုမြင့်မားပြီးဆေးလိပ်ပိုသောက်လေလေ သွားဖုံးရောဂါ ရနိုင်ခြေ မြင့်မားလာလေပါပဲ။
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ သင့်အနေနဲ့ လေဖြတ်ခြင်းဝေဒနာ ကို ခံစားရနိုင်ခြေ ၃ ဆမျှ မြင့်မားပါတယ်။ လေဖြတ်တယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ထဲ သွေးခဲမှုကြောင့် မျက်နှာ အကြောလိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ဖို့ မလွယ်ခြင်းနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သေဆုံးသည် အထိဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အစာခြေ လမ်းကြောင်း။
Peptic ulcers လို့ခေါ်တဲ့ အစာခြေ အက်ဆစ်တွေ အဆမတန်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပွားလာတဲ့အနာများ၊ Burrill Bernard Crohn လို့ခေါ်တဲ့ အစာခြေ စနစ်ကို အထူးပြုလေ့လာခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် ကိုအစွဲပြုပြီးပေးထားတဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းများ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းတဲ့ Crohn’s disease ရောဂါ၊ အူမကြီးတွင်မူမမှန်သော အဖုအသီးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ပန်ကရိယရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပန်ကရိယကင်ဆာနဲ့ အစာခြေလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ ဆေးလိပ်သောက်သုံးတာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတစ်ဦးဟာ သာမန်လူတစ်ဦးထက် type2ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမြင့်မားပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ရင် အဆုတ်ပျက်စီးလာတယ်ဆိုတာကတော့ အထွေအထူး ပြောစရာတောင် သိပ်လိုအပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ အမေရိကန်မှာ လူသေဆုံးမှု အများဆုံးကို ဖြစ်စေတဲ့ကင်ဆာရေဂါတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေတဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ အဆုတ်ကင်ဆာသာမက တစ်ခြားသောကင်ဆာတွေ ဖြစ်တဲ့ ပါးစပ်ကင်ဆာ၊ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ၊ အသည်းကင်ဆာ၊ ဆီးအိမ်ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယ ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီး ကင်ဆာနဲ့စအိုလမ်းကြောင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေလည်း မြင့်မားပါတယ်။ COPD (chronic obstructive pulmonary disease) လို့ခေါ်တဲ့ အဆုတ်အတွင်းက လေအိတ်သေးလေးတွေ ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါတွေ အားလုံးပေါင်းလို့ လူသေနှုန်းထက် နှလုံးရောဂါ ကြောင့် လူသေနှုန်းကအမေရိကန်မှာ ပိုများပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ဒီနှလုံးရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါ သွေးလွှတ်ကြောတွေက မာကြောပြီး ကျဉ်းမြောင်းလာတဲ့အပြင် သွေးတွေဟာ ပိုပျစ်ပြီး ခဲလာပါတော့တယ်။ ဒီလို သွေးလွှတ်ကြောနဲ့ သွေးများ သာမန်အခြေအနေ မရှိတဲ့ အခါမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ နှလုံး လုပ်ဆောင်မှု ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း (heart attack) ဝေဒနာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
Accessed (16. June. 2018)